Flim2MM: November 2017
နာဇီပါတီ ပါတီရဲ့ အဓိပတိကြီး ဟစ်တလာဟာ ဂမ္ဘီရပစ္စည်းတွေကို စိတ်ဝင်စားတာ စာဖတ်သူအပေါင်းလည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ ။
ဂျာမဏီမှာ နာဇီပါတီ အာဏာရချိန် အာဏာရှင် အဓိပတိကြီး ဟစ်တလာရဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲကမှ ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ ဂမ္ဘီရစာအုပ် အခိုးခံလိုက်ရတယ် ။
စာအုပ်ခိုးသူဟာ ပြေးရင်း မိသားစုတစ်စု ရှိတဲ့ အိမ်ကို ရောက်သွားပါတယ် ။ အိမ်ရှင်တွေက သူ့ကိုဝှက်ပေးထားပေမယ့် ဂတ်စ်တာပိုလ်တွေ ဖမ်းမိသွားအခါမှာ ဂျာမန်အရာရှိတွေက အိမ်ရှင်တွေကိုပါ သတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ် ။
သို့သော် အိမ်ရှင်ရဲ့ သမီးက စာအုပ်နဲ့ အတူ လွတ်မြှောက်သွားပါတယ် ။ စာအုပ်က ဘယ်လို လျှူို့ဝှက် စာအုပ်လဲ ၊ ဘယ်လို ဂမ္ဘီရစာအုပ်မျိုးလဲ ၊ ဘာတွေမှော်ဝင်နေလို့လဲဆိုတာတော့ သည်းထိတ်ရင်ဖို ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါလို့ ပြောရင်း .....
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - Rashly Nay Win
[GENRE]:……………………….… .:) Horror
[FILE SIZE]:…………………….….:) 604 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 24 mins
[Translated By]:………….........:) Kyaw Swar
Posted by Y Junction at 9:11:00 AM No comments:
Labels: Europe, Horror
ဒီတစ်ခါတော့ ကာတွန်းကား ကောင်းကောင်း လေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီကားလေးက ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ထွက်ခဲ့ပြီး၊ စထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်ထဲက အခုအချိန်အထိ Valentine’s Day ရုပ်ရှင်အဖြစ် လူကြိုက်များခဲ့သလို၊ သူ့ထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းလေး တစ်ခုက အချစ် နဲ့ပတ်သက်လာရင် အခုအချိန်အထိ လူပြောများနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Up ကာတွန်းလေးက သာမန် ကာတွန်းကားတစ်ကား တင်မဟုတ်ပဲ၊ အက်ရှင် ဒရမ်မာ ကောင်းကောင်း နဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ Animated Film တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်း ကောင်းကောင်း နဲ့ လူကြီး လူငယ် ပရိတ်သတ် အားလုံးကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေတော်တော်များများ ကြည့်ဖူးပေမယ့် ကြည့်ရင်းနဲ့ မျက်ရည်ဝဲလောက်အောင် ခံစားချက်ရသပေးနိုင်တဲ့ ကားမျိုး က လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်။ ဒီ UP ကတော့ ဇာတ်လမ်း အစမှာထဲက တင်ဆက်ပုံကောင်းကောင်းနဲ့ ပရိတ်သတ်ကို ဖမ်းစားသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ Carl ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ Ellie ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက explorer Charles F. Muntz ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို လေးစားအားကျသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Charles က Paradise Fall မှာ ရှိတဲ့ ရှားပါးတဲ့ ငှက်ကြီးတစ်ကောင်ကို သူဖမ်းမိဟန်ဆောင်ပြီး အဲ့ဒီငှက်ရဲ့ အရိုးစုကို အတုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေက အတုမှန်းသိသွားပြီး အရှက်ရသွားတဲ့ နောက် Paradise Fall ကို ပြန်သွားပြီး အဲ့ဒီငှက်ကို မမိမချင်း ပြန်မလာဘူးဆိုပြီး ထွက်သွားပါတယ်။ Charles အကြောင်းကို ပြပြီးတဲ့နောက်မှာ Carl နဲ့ Ellie တို့ ကလေးဘ၀နဲ့ တွေ့ကြပုံက စပြီး သူတို့ ရဲ့ လူငယ်ဘ၀ ချစ်သူတွေဖြစ်သွားပုံ၊ လူလတ်ပိုင်း လက်ထပ်ကြပုံ၊ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ ချစ်ကြည်နူးကြပုံ၊ ကလေးမရနိုင်တဲ့အကြောင်း ကစလို့ အသက်ကြီးသွားပြီး Ellie တစ်ယောက် လူလောကကို စွန့်ခွာသွားပုံ ကို တင်ဆက်ထားတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးက ပညာသားပါပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ အထင်ရှားဆုံးနဲ့ လူကြိုက်အများ ဆုံး ဇာတ်ဝင်ခန်းလေး ဖြစ်နေပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းက အခုမှစတာဖြစ်ပြီး လူငယ်ဘ၀ က Paradise Fall ကို သွားဖို့ ပိုက်ဆံစုခဲ့၊ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့်မရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ Ellie မရှိတော့တဲ့အချိန်ကြမှ သူ့မိန်းမရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အတွက် သူတို့ရဲ့ အိမ်ကြီးကို မိုးပျံပူပေါင်းတွေ နဲ့ ဆင်ပြီး ဘယ်သူနဲ့မှ မတူနဲ့ ပုံစံနဲ့ ခရီးထွက်ဖြစ်ရာကနေ Adventure စတင်ပါတော့တယ်။ အဘိုးအို Carl နဲ့အတူ လူငယ် Explorer တစ်ယောက်၊ Carl ရဲ့ လူငယ်ဘ၀ က လေးစားအားကျခဲ့တဲ့ Charles F. Muntz နဲ့ သူ့ရဲ့ လူစကားပြော တတ်တဲ့ လည်ပတ်တွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ခွေးတွေရယ်၊ Giant Bird ရယ်၊ ဆုံတွေ့ကြတဲ့အခါမှာတော့၊ Carl တစ်ယောက် သူထင်ထားသလို ဖြစ်မလာတဲ့ Adventure ကို စိတ်ဝင်စားစရာ တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ လူ့ဘ၀ ရဲ့ ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလည်းမှု မြန်ဆန်ပုံကို သတိတရားရစေပါတယ်။ အနားမှာရှိနေတဲ့ အရာတွေ၊ လူတွေကို တန်ဖိုးထားတတ်လာအောင် ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူတွေက ကိုယ့်နားမှာအမြဲရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သံဝေဃရလာအောင် နှိုးဆော်ထားနိုင်ပါတယ်။ Don’t Take People for granted ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေကို တန်ဖိုးထားပါ။ ဘ၀ကို မနက်ဖြန်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူးလို့ သဘောထားပြီး လက်ရှိအချိန်မှာ အရာရာကို တန်ဖိုးထားပြီး နေသင့်ပါတယ်။
ကာတွန်းကားဖြစ်လို့ အထင်မသေးသင့်ပဲ မကြည့်ရသေးရင် ကြည့်သင့်ပါတယ်။ မိသားစုကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ။ Pixar ရဲ့ ကာတွန်းကားဖြစ်လို့ ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ ညွှန်းနေဖို့တောင်မလိုတော့ပါဘူး။ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ကြပါ။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - #Sololay (http://yoteshinmatesat.blogspot.com)
[GENRE]:……………………….… .:) Animation, Adventure, Comedy
[FILE SIZE]:…………………….….:) 689 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 36 mins
[Fixed By]:………………….........:) Wai Linn Kyaw
Posted by Y Junction at 9:45:00 PM No comments:
လုပ်စရာတွေများလွန်းလို့ ၁၀ ကိုယ်လောက် ခွဲထားချင်တယ်လို့ ညည်းတွားဖူးတဲ့သူတွေကို တွေ့ဖူးမှာပါ။ ကိုယ်တိုင်သွားလုပ်စရာမလိုဘဲ ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ပေးမယ်သူတွေနဲ့သာဆိုရင် အလုပ်ပိုမိုတွင်ကျယ်မှာပါ။ သို့သော် ဒီဇာတ်ကားလေးကြည့်ပြီးရင် ကိုယ်စား၊ ကိုယ်ပွားတွေနဲ့ လုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သိရမှာပါ။
၁၄ နှစ်အတွင်း အဆင့်ဆင့်တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေက လူတွေကို အထောက်အကူအများကြီး ဖြစ်လာသလို တစ်ဖက်ကလည်း တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာကို လက်မခံတဲ့သူတွေ ရှိနေပါတယ်။ အိမ်ကနေပြီး အပြင်ကို ထွက်စရာမလိုပဲ ကိုယ်စားစက်ရုပ်တစ်ခုနဲ့ အလုပ်တွေကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ်နိုင်လာတဲ့အထိ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ အရာရာဟာ အစစ်အမှန်မရှိသလောက်ပါပဲ။
ဒါတွေအားလုံးရပ်တန့်သွားမယ် အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ကိုယ်စားစက်ရုပ်ကို သတ်တာနဲ့ ထိန်းချုပ်သူပါ သေဆုံးသွားတဲ့ အမှုတစ်ခုကို အဖြေရှာရင်း ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့.......
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Sci-Fi, Thriller
[FILE SIZE]:…………………….….:) 634 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 29 mins
Posted by Y Junction at 9:37:00 PM No comments:
God ကို အပြစ်တင်ဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်လိုက်ပါ။
High-Concept Comedy ကားလေးတစ်ကားဖြစ်တဲ့ Bruce Almightyနဲ့ မိတ်ဆက် ပေးချင်ပါတယ်။ ရယ်မောအပန်း ဖြေနိုင်သလို ပညာပေးလေးလည်း ဖြစ်တဲ့ ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ ဒီကားမှာ Jim Carrey (The Mask, Ace Ventura), Morgan Freeman (Shawshank Redemption), Jennifer Aniston (We're the Miller) တို့အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကတော့ Bruce Nolan (Jim Carrey) နဲ့ Grace Connelly (Jennifer) တို့က အတူနေ ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီး Bruce က Reporter တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ သတင်းကြေငြာသူအဖြစ် ရာထူးတိုးဖို့ ကြိုးစား မျှော်လင့်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ အပြိုင် Evan (Steve Carell) က သတင်းကြေငြာ သူဖြစ်သွားတဲ့ အခါမှာတော့ စိတ်မထိန်းနိုင်ပဲ၊ Live News မှာ ထပေါက်ကွဲလို့ အလုပ်က ထုတ်ခံရပါတယ်။ Bruce က သူ့ဘ၀မှ အဆင်မပြေတာ တွေ ကြုံလာတိုင်း God ကိုပဲအပြစ်တင်လေ့ရှိပြီး ဒီတစ်ခါမှာလည်း God က အလုပ်ကို ကောင်းကောင်းမလုပ်သလို၊ Evan ကို ပဲ ကြည့်ရှုစောင်မနေပြီး၊ သူ့ကို တော့ လျစ်လျူရှုထားတယ်လို့ ဒေါသတကြီး အပြစ်တင်ဝေဖန်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ သူ့ရဲ့ Pager က ဖုန်းဝင်လာပြီး ဖုန်နံပါတ် 555-0123 လို့ပေါ်နေပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့မနက်ရောက်တဲ့အထိ Pager မှာ ၀င်နေတာ ဖြစ်လို့ ဖုန်းပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာ သူ့ကို အလုပ် ခန့်မှာဖြစ်လို့ အရောက်လာဖို့ချိန်းဆိုပါတယ်။ သူရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ထင်ထားသလို ဖြစ်မနေပဲ သူ့ကိုအလုပ်ခန့်ဖို့ခေါ်လိုက်တာကတော့ God ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာ ကို တွေ့လိုက် ရပါတယ်။ God က သူ့ကို ခဏခဏအပြစ်တင်နေတဲ့ Bruce ကို သူ့ရဲ့ ပါဝါတွေ အကုန်လွှဲပေးပြီး God ရဲ့အလုပ်ကို လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ သူ့ထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် လုပ်ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။
God ရဲ့စွမ်းအားတွေရသွားတဲ့ Bruce တစ်ယောက် စိတ်တိုင်းကျ လျှောက်လုပ်ရင်း ဖြစ်လာတာတွေကို ဟာသနှောပြီး တင်ဆက်ထားသလို နောက်ဆုံးမှာ လိုချင်တာရှိရင် ရအောင် ဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင် ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖို့၊ အရာအားလုံး ဆုတောင်းနေရုံနဲ့ဖြစ်မလာ နိုင်ဘူးဆိုတာကို သိသွားတဲ့ Bruce တစ်ယောက် အမြင်မှန်ရသွားပုံကို စိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ဟာသဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပြီး၊ Jim Carrey ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားတွေထဲက တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Morgan Freeman ကလည်း Hollywood မှာ သူ မလုပ်ဖူးတဲ့ ဇာတ်ရုပ်မရှိသလောက် လို့ဆိုရအောင် ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားအဖြစ်နဲ့ ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ပညာသားပါပါရိုက်ကူးထားပြီး၊ ဇာတ်လမ်းကလည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းကောင်းနဲ့ ရိုက်ကူးထားပြီး၊ လူငယ်တွေအတုယူနိုင်အောင် တင်ဆက်ထားပါတယ်။ Be the Miracle ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်လေးက ဒီကားရဲ့ အမှတ်ရစရာ စကားလေးအဖြစ် ကျန်နေခဲ့မှာပါ။
မိသားစုတူတူကြည့်နိုင်ပြီး Rated PG-13 ပါ။ (No Nudity)ပါ။ sex scene တစ်ခန်း ပါတယ်ဆိုပေမယ့် ဟာသအဖြစ်တင်ဆက်ထားတာပါ။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - Sololay (www.yoteshinmatesat.com)
[GENRE]:……………………….… .:) Comedy, Drama, Fantasay
[FILE SIZE]:…………………….….:) 796 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 41 mins
Labels: Comedy, Drama, Fantasy, Hollywood
Captain America က ၁၉၄၁ မှာ စပေါ်ခဲ့တာပါ။ WWII အတွင်းက ဖက်စစ်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ German, Japan တို့ကို ဝါဒဖြန့်၊ သရော်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လည်း စလုပ်ခဲ့တာပါ။ Captain America ကို စလုပ်တုန်းက မျိုးချစ်စိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ Superhero တစ်ယောက်အနေနဲ့ စလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Super American လို့ နာမည်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ပြီးမှ Super ဆိုတာတွေ များနေလို့ဆိုပြီး နာမည်ပြန်ပြောင်းခဲ့တာပါ။ WWII အတွင်းနဲ့ စစ်ပြီးကာစ ကာလတစ်ခုအထိ Timely Comics (Marvel Comics အရင်နာမည်) ရဲ့ Superhero character တွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် နာမည်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ဇာတ်လမ်းကတော့ ရုပ်ရှင်ထဲကလိုပါပဲ။ Steven Rogers က ငယ်ငယ်တုန်းက ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်နဲ့ အနုပညာ ဝါသနာပါတဲ့ ပန်းချီကာတွန်း ဆွဲလေ့ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ စစ်ဖြစ်တော့ Nazi တွေကို တိုက်ဖို့အတွက် တပ်ထဲဝင်ခဲ့ပေမဲ့ ကျန်းမာရေးကြောင့် အပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ Project Rebirth ဆိုပြီး Super Soldier တွေလုပ်ဖို့ ပြင်နေတဲ့ General Chester Phillips က သတိထားမိပြီး ခေါ်ခဲ့တယ်။ Abraham Erskine ရဲ့ serum နဲ့ လုပ်မှာပါ။ Serum ကြောင့် Steven Rogers ဟာ super soldier ဖြစ်ခဲ့ပြီး လူတွေရဲ့ standard နဲ့ဆို အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်နေတဲ့ stamina, strength နဲ့ intelligence တို့ကို ရခဲ့တယ်။ ပညာရှင် Erskine ဟာ serum formula နဲ့ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီးအချက်တွေကို လျှို့ဝှက်ဖို့အတွက် ချမရေးခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် Nazi Spy တစ်ယောက်က Erskine ကို လုပ်ကြံခဲ့တဲ့အခါ super soldier ဇာတ်လမ်းက ပျက်သွားခဲ့ပါတယ်။
Project Rebirth ကို ဖုံကွယ်ချင်တဲ့အတွက် US အစိုးရက Steve Rogers ကို Captain America ဆိုတဲ့ Codename ပေးခဲ့တယ်။ Nazi Villain ကြီးဖြစ်တဲ့ Redskull ကို ပြန်တိုက်ဖို့အတွက်ပါ။ Cap ကို သူ့ကိုယ်ပိုင် ဒီဇိုင်းနဲ့ Uniform ပေးတယ်၊ ကျည်ကာဒိုင်း၊ sidearm (pistol) တစ်လက်တို့ကိုပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ တပ်တွင်းမှာတော့ clumsy ဖြစ်နေတဲ့ စစ်သားတစ်ယောက်လိုပဲ နေပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တပ်ထဲမှာ teenager တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Bucky Barnes နဲ့ ခင်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ Steven Rogers က Captain မှန်း Bucky သိသွားပြီး သူ့ Secret Identity ကို လျှို့ဝှက်ပေးစေချင်ရင် သူ (Bucky) ကို Captain ရဲ့ sidekick လုပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးလုပ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ သမ္မတ Franklin Roosevelt က Cap ကို vibranium နဲ့ steel ရောတဲ့ သတ္တုစပ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဒိုင်းတစ်လက်ကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ ဒိုင်းက ကောင်းအားကြီးလို့ Cap က သူ့သေနတ်တောင် မသုံးတော့ပါဘူး။
Cap နဲ့ Bucky တို့အဖွဲ့ Villain ကြီး Baron Zemo ကို လိုက်ဖမ်းကြရင်း Baron ရဲ့ စမ်းသပ်ဆဲ Drone ယာဉ်ပေါ်ကဗုံးကို ဖြုတ်ဖို့လုပ်ကြရပါတယ်။ လေယာဉ်ပျံတက်တက်ချင်း နှစ်ယောက်လုံး လေယာဉ်ပေါ် ပါသွားတယ်။ Bucky က ဗုံးဖြုတ်တုန်း လေထဲမှာတင် ထ ပေါက်လို့ Bucky လည်း အစပျောက်၊ Rogers လည်း ရေခဲတဲ့အထိ အေးတဲ့ ပင်လယ်ထဲ ကျသွားပြီး သေကုန်တယ်လို့ မှတ်ယူကြပါတယ်။ သိကြမဲ့အတိုင်း နှစ်ယောက်လုံး မသေပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ Avengers အဖွဲ့က Cap body ကို ပြန်တွေ့လို့ ပြန်အသက်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ပြန်ထလာတဲ့အခါကျတော့လည်း Avengers အဖွဲ့ထဲ ဝင်ပြီး mission တွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Captain America ဦးဆောင်တဲ့ superhero comic တွေက စစ်အတွင်းမှာ အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ စစ်ပြီးတော့ အရှိန်ကျလာခဲ့တယ်။ Cap ကို ၁၉၅၀ လောက်မှာ ရပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၄ ကျမှ သေချာ ပြန်အသက်သွင်းခဲ့တယ်။ အစက ဒီအတိုင်း ရပ်ခဲ့ပေမဲ့ ၆၄ မှာ ပြန်စတော့မှ Cap နဲ့ Bucky တို့က drone ပေါ်မှာ ဗုံးဖြုတ်ရင်း သေတယ်လို့ ဖြစ်သွားတာ ခုမှ Avengers အဖွဲက Cap body ပြန်တွေ့ ပြန်အသက်သွင်းလို့ ပြန်ထလာတယ်ဆိုပြီး ဇာတ်လမ်းပြန်စတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - ဓါတ်ရှင် (www.datshin.com)
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Adventure, Sci-Fi
[FILE SIZE]:…………………….….:) 890 MB/ 973 MB/ 1 GB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 27 mins
Posted by Y Junction at 5:25:00 PM2comments:
Labels: Action, Adventure, Hollywood, Sci-Fi
Animation ကားတွေမှာ အရေးပါဆုံးဆုလို့ပြောလို့ရတဲ့ Best Animated Feature ဆုကို ၂၀၁၃ Oscar ပေးပွဲမှာ ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့အပြင် IMDb 7.2 ရထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးခေတ် စကော့တလန်ရဲ့ ဒဏ္ဍာရီကာလဆီက
မင်းသမီးလေ Merida ရဲ့စွန့်စားခန်းတွေကို ရှုစားရင်း....
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Adventure, Comedy
[FILE SIZE]:…………………….….:) 671 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 33 mins
Posted by Y Junction at 11:03:00 PM No comments:
NASA က တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကမ္ဘာမြေဟာ...
နေ့စဉ် စကြာဝဋ္ဌာထဲက သဲဖုန်မှုန့် ကျရောက်မှုပမာဏ တန် ၁၀၀ ခန့် ရှိပါတယ်။
နှစ်တိုင်း လေထုမျက်နှာပြင်ကို ကားတစီးအရွယ် အစိုင်အခဲများ ထိမိခိုက်မိပါတယ်။
နှစ် ၂၀၀၀ တိုင်းမှာ ဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းစာအရွယ်ရှိ ဂြိုလ်သိမ်ဂြိုလ်မွှားနဲ့ ထိမိနိုင်ပါတယ်။
Harry Stamper တို့ ရေနံတူးဖော်တဲ့အဖွဲ့ဟာ လူဂွစာအဖွဲ့ပါ။ သူတို့မှာ သူမတူတဲ့ အရည်အချင်းတွေလဲ ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အရေးပါပုံကို ကမ္ဘာကြီးကယ်တင်ဖို့လိုလာတဲ့အခါမှာ သိရပါတော့မယ်။ ဖြစ်ပုံက ကမ္ဘာမြေကို ၁၈ ရက်နေ့အတွင်း ဝင်ရောက်ထိခိုက် ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ ဂြိုလ်သိမ်ဂြိုလ်မွှား တစ်ခုကို ဖျက်စီးပစ်ဖို့ပါပဲ။
NASA အနေနဲ့က ကာကွယ်မဲ့အစီအစဉ်ကောင်းကောင်းမရှိ၊ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာကလည်း နျူးကလီယားနဲ့ ထုပြီး အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ လူဂွစာအဖွဲ့ ဘာတွေ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကမ္ဘာမြေကို ကယ်တင်မလဲ ဆိုတာကတော့.....
[FILE SIZE]:…………………….….:) 973 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 31 mins
Posted by Y Junction at 8:58:00 PM No comments:
တစ်စုတစ်စည်းထဲ ပြန်ပေါင်းထုပ်ထားပါသည်။ (Google Drive+Openload)
Stark Industries ရဲ့ သူဌေးကြီး Howard Stark ရဲ့ သား Anthony Stark က ငယ်ငယ်တည်းက အရမ်းထက်တယ်။ ၁၅ နှစ်နဲ့ MIT ဝင်တယ်။ Electrical Engineering နဲ့ Physics တို့မှာ Master ရခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း မိဘတွေ ယာဉ်မတော်တဆမှုနဲ့ ဆုံးသွားတော့ သူ့အဖေနေရာ ယူပြီး Stark Industries ကို ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ တစ်ရက်မှာ Tony ဟာ လူဆိုး Wong Chu ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့ ချုံခိုတိုက် ဖမ်းတာခံရပြီး ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်။ ဒဏ်ရာကြောင့် ရင်ဘတ်မှာရခဲ့တဲ့ ဗုံးစတွေက သူ့နှလုံးဆီကို တဖြည်းဖြည်းရွေ့ပြီးသွားနေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူဆိုးစခန်းမှာရှိတဲ့ Tony အရင်က အရမ်းလေးစားခဲ့ရတဲ့ Nobel ဆုရ ပညာရှင်ကြီး Ho Yinsen က Tony ရဲ့ ရင်ဘတ်မှာ သံလိုက်ပြားတစ်ပြားပတ်ထားပေးရတယ်။ Wong Chu က Tony ကို လက်နက်တွေ လုပ်ပေးဖို့ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ Tony နဲ့ Yinsen တို့နှစ်ယောက်က စက်ရုပ်ဝတ်စုံ Armour တစ်ခုကို ထွင်ပြီး ထွက်ပြေးကြတယ်။ Tony တစ်ယောက် ရင်ဘတ်က သံပြားကို အားပြန်သွင်းနေတဲ့အချိန်မှာ လူဆိုးတွေကို မျှားခေါ်ပြီး အချိန်ဆွဲပေးခဲ့တဲ့ Yinsen တစ်ယောက် အသတ်ခံရတယ်။ Tony ကလည်း စခန်းကို Yinsen အတွက် လက်စားချေခဲ့ပြီး US စစ်တပ်ဆီပြန်ခဲ့တယ်။ လမ်းမှာ ဒဏ်ရာရနေတဲ့ ရေတပ် လေယာဉ်မှူး James Rhodes နဲ့ တွေ့ခဲ့တယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့ Tony တစ်ယောက်သိရတာက သူ့ရင်ဘတ်က ဗုံးစတွေကို သူအသက်အသေမခံဘဲ ထုတ်ပစ်လို့မရဘူးဆိုတာပါ။ ဒါကြောင့် နေ့တိုင်း သူ့မှာ ရင်ဘတ်က သံလိုက်ပြားကို အားပြန်သွင်းရပါတယ်။ Media နဲ့ လူတွေကိုပြောထားတာကလည်း Iron Armour (Iron Man) ကြီးက သူ့ body guard တစ်ယောက်ဆိုပြီးတော့ပါ။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း သူ့ကုမ္ပဏီရဲ့ ရန်သူတွေဖြစ်တဲ့ ကွန်မြူနစ်တို့ ဖက်စစ်တို့နဲ့ကိုလည်း ဝတ်စုံသုံးပြီး လိုက်နှိမ်နှင်းခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မကုန်မခန်းနိုင်တဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကို သုံးပြီး သူကိုယ်တိုင်အတွက် ဝတ်စုံ လက်နက်တွေ လုပ်ခဲ့သလို S.H.I.E.L.D. အဖွဲ့အတွက်လည်း Quinjet တို့ လေယာဉ် ကိရိယာ လက်နက်တွေ လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ S.H.I.E.L.D ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသလို US အစိုးရရဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။
Stark က ပြသနာတွေလည်း တော်တော်စုံခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဝတ်စုံနဲ့ chestplate သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့် အာရုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြသနာတွေ ခဏခဏတက်တယ်။ ဦးနောက်ထဲမှာလည်း chip တွေ ထည့်ခဲ့ရတယ်။ Civil War အတွင်းမှာလည်း အစိုးရရဲ့ Superhuman Registration Act ကို ထောက်ခံပြီး မထောက်ခံတဲ့ မြေအောက် superhero အဖွဲ့တွေနဲ့ စစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး Captain America အသတ်ခံရတဲ့အခါကျမှ ဖြစ်ခဲ့သမျှ ဘာမှ မတန်ဘူးဆိုပြီး နောင်တအကြီးအကျယ်ရခဲ့တယ်။ Skrull ဆိုတဲ့ alien invasion မှာလည်း ကမ္ဘာကို မကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် သူ့ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေလည်း ပျက်ခဲ့လို့ အစိုးရက S.H.I.E.L.D အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာက ဖယ်ပစ်ခဲ့ပြီး Norman Osborn ကို ပေးခဲ့တယ်။ သိတဲ့အတိုင်း Villain ဖြစ်တဲ့ Norman Osborn ကို S.H.I.E.L.D အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် Stark က ရှိသမျှ server တွေမှာ သိမ်းထားတဲ့ Superhuman Registration Act ရဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ အထဲမှာ ပါသမျှ Superhero တွေရဲ့ secret identity တွေပေါ်ကုန်မှာစိုးလို့ Virus တစ်ခုလွှင့်ပြီး အကုန်လိုက်ဖျက်တယ်။ နောက်ဆုံး သူ့ဦးနောက်မှာတပ်ထားတဲ့ chip က ဟာကိုပါဖျက်ဖို့လုပ်ရင်း brain damage ဖြစ်သွားလို့ ပြန်ထမလာတော့ပါဘူး။ Doctor Strange ကယ်လို့သာ ပြန်ထလာတာပါ။
Brain damage ဖြစ်ပြီးနောက် Tony ဟာ Arc reactor ကိုအမှီပြုပြီး အသက်ရှုတာ မျက်တောင်ခတ်တာ နှလုံးခုန်တာတွေ လုပ်နေခဲ့ရတယ်။ မှတ်ဥာဏ်တွေပျက်သွားပြီး chip မှာသိမ်းထားတဲ့ Backup data ကိုသုံးလာရတယ်။ Backup ကလည်း Civil War မတိုင်ခင်မှာလုပ်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့ civil war အကြောင်းသူမမှတ်မိပါဘူး။ တခြား မှတ်ဥာဏ်တွေ လွတ်တာ ပျက်နေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - ဓါတ်ရှင်(www.datshin.com)
[FILE SIZE]:…………………….….:) 903 MB/ 940 MB/ 945 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 10 mins
Posted by Y Junction at 9:21:00 PM No comments:
ဒီကားလေးဟာဆိုရင် စာရေးဆရာကြီး ၀ီလီယံရှိတ်စပီးယားရဲ့ "Helmet" ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးကိုကျောရိုးကိုယူပြီး ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ ဆုပေါင်းများစွာ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ Action/Crime အမျိုးအစားကားကောင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဇာတ်အိမ်ကိုတော့ ၁၉၉၅ခုနှစ် ကတ်ရှမီးယားဒေသကို အခြေပြုထားပါတယ် ။ လူငယ်လေးတစ်ယောက်သူ့ဖခင် ရုတ်တရက် ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်း သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပဲ အဲဒီကတ်ရှမီးယားဒေသကို သွားရောက်ခဲ့တာက စတင်ထားပါတယ် ။
ကတ်ရှမီးယားဒေသကိုအခြေတည်ထားတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက်တချက်ပါပဲ ။ ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပဋိပက္ခ နယ်မြေက မိသားစုချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ နောက်ကွယ်က ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေရှိနေလည်း ဆိုတာတော့ စိတ်ဝင်တစား ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါပဲ ။
[GENRE]:……………………….… .:) Action,Crime, Drama
[FILE SIZE]:…………………….….:) 1GB, 694 MB
Posted by Y Junction at 12:31:00 AM No comments:
ဇာတ်လမ်းက အရမ်းကောင်းသလို Oscar ၂ ဆုရ မင်းသမီး Jodie Foster ရဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်း အပြည့်အဝခံစားရမှာပါ။
ဘာလင်ကနေ အမေရိကကို သားအမိနှစ်ယောက်အတူပြန်လာချိန် ပေ ၃၀၀၀၀ အထက်မှာ ပျံသန်းနေတဲ့ လေယာဉ်ပျံပေါ်မှာ သမီးငယ်လေး ပျောက်သွားပါတယ်။လိုက်ရှာတော့တခြားလူတွေက လေယာဉ်ပေါ်စတက်ကတည်းက မတွေ့မိကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဆန်းကြယ်စွာ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့....
[GENRE]:……………………….… .:) Drama, Mystery, Thriller
[FILE SIZE]:…………………….….:) 663 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 38 mins
Posted by Y Junction at 2:19:00 AM No comments:
မိသားစု ၃ ပုံမှာ ၁ ပုံသာ မိမိ ကလေးများကို ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ပြီး အင်တာနက်သုံးခွင့် ပိတ်ပင်ထားတာတွေ့ရပါတယ် လို့ ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ကလေးသူငယ် ၃၃ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ခန့်ဟာ လိင်အကြမ်းဖက်မှုခံနေရပါသည် လို့ အင်တာနက်စစ်တမ်းက ထုတ်ပြန်ထားသေးတယ် ။ အသက် ၁၄နှစ် အထက်ကို ၇၇ % အသက် ၁၀နှစ်နဲ့ ၁၃နှစ်ကို ၂၂ % ပစ်မှတ်ထားခံကြရပါတယ် လို့ ကလေးအကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်ရေးကလည်း ထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ် ။
အခု ဒီဇာတ်ကားမှာ မိခင်နောက်အိမ်ထောင် ပထွေးနဲ့ နေရတဲ့ ဖတဆိုး သမီး အသက် ၁၆ နှစ် မိန်းကလေးတစ်ဦးက ဆိုရှယ်နက်ဝက်သုံးရင်း အသက်ကြီးကြီး လိင်မုဆိုးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဆုံတာကို ဇာတ်လမ်းဖွဲ့ထားတယ် ။ အင်တာနက်မှာတွေ့တယ် အပြင်မှာချိန်းတယ် ။ လိင်မုဆိုး ချိန်းတဲ့ နေရာကို တစ်ကိုယ်တည်း ကားမောင်းထွက်ခဲ့တယ် ။
မိဘ သားသမီး နဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က လိင်မုဆိုးတွေရဲ့ ကစားပွဲတစ်ခုပါပဲ ။ ကြည့်သင့်ပါတယ်လို့ အကြံပြုပါရစေ .....
[GENRE]:……………………….… .:) Thriller
[FILE SIZE]:…………………….….:) 658 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 27 mins
Posted by Y Junction at 6:18:00 AM No comments:
Posted by Y Junction at 12:29:00 PM No comments:
Posted by Y Junction at 5:30:00 AM 1 comment:
ဒီဇာတ်ကားက Pittacus Lore ရေးတဲ့ ဝတ္ထုအတွဲတွေထဲက ပထမဆုံး စာအုပ်ကို ဇာတ်ညွှန်းပြုပြီး ရိုက်ထားတာပါ။ တခြားစာအုပ်တွေဖြစ်တဲ့ "The Power of Six," "The Rise of Nine," "The Fall of Five," "The Revenge of Seven" နဲ့ "The Fate of Ten." စာအုပ်တွေကျန်ပါသေးတယ်။ ရုပ်ရှင်ထပ်ရိုက်မရိုက်တော့ မပြောတက်ဘူး။
ကမ္ဘာမြေမှာ လာရောက်နေထိုင်နေတဲ့ ဂြိုလ်သား ၉ ယောက်နဲ့ သူတို့ရဲ့အုပ်ထိန်းသူတွေ ကို လိုက်ရှင်းနေတဲ့ Mogadorian တွေကို ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ထားတာပါ။ နံပါတ် ၁/၂ /၃ အသတ်ခံရပြီးနောက် ၄ ယောက်မြောက် အလှည့်မှာတော့.....
[FILE SIZE]:…………………….….:) 863 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 49 mins
Posted by Y Junction at 7:45:00 AM No comments:
မန်ဂျီ ဆိုတဲ့ ဆာမူရိုင်းက မသေနိုင်တဲ့အစွမ်းတစ်ခုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအစွမ်းကို ကြာတော့ စိတ်ပျက်လာတယ်။ သေခြင်းတရားကို လွန်ဆန်နိုင်သွားတဲ့သူတွေမှာလည်း အခက်အခဲရှိကြောင်း၊ မေတ္တာအနှောင်အဖွဲ့သာမရှိရင် အသက်ရှင်နေတာ ဘာအဓိပ္ပာယ်မှ မရှိကြောင်း ဖော်ညွှန်းထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ဆာမူရိုင်းကားတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း သွေးသံရဲရဲဓားခုတ်ချက်တွေကလည်း တစ်လှေကြီးပါဝင်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ Takashi Miike ရဲ့ ဇာတ်ကား ၁၀၀ပြည့် အမှတ်တရလက်ရာဖြစ်ပြီး မူရင်းဇာတ်လမ်းက Manga အပေါ်အခြေခံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Drama
[FILE SIZE]:…………………….….:) 999 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 20 mins
[Translated By]:…………………..:) Wai Linn Kyaw
Posted by Y Junction at 8:01:00 PM No comments:
Labels: Action, Drama, Japan
- Non-Stop Action ဆိုတာကိုမှ ကြိုက်သူများအတွက်.....
- So Close တို့ Naked Weapon လို ဇာတ်ကားမျိုးကို စောင့်နေတာဆို သူတွေအတွက်.....
- Drama ဆိုရင်လည်း ကိုရီးယားမှ ဆိုတဲ့ K Fan တွေအတွက်......
IMDb မှာ 6.7 ရထားပြီး Best Cinematography ဆုနဲ့ Technical Award တွေ ရရှိထားပြီး
John Wick လိုမျိုးအက်ရှင်ကားမျိုးနဲ့ တန်းညီထားတဲ့
၂၀၁၇ ထွက် The Villainess ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆိုဟီ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ လက်စားချေမှုကို ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦး....
[GENRE]:……………………….… .:) Action
[FILE SIZE]:…………………….….:) 884 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h9mins
[Translated By]:…………………..:) R!B
Posted by Y Junction at 1:23:00 AM No comments:
Labels: Action, Korea
2017 ထွက် ဇာတ်ကားကောင်းတွေ အများကြီး ရှိရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ IMDb မှာ Rating မကောင်းတဲ့ကားကိုမှ တင်ရသလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ ဘာသာပြန်သူရဲ့အဆိုအရတော့ ဇာတ်လမ်းအချိုးအကွေ့ကို ဘာမှ မသိရလို့ ကြိုက်တာလို့ ပြောပါတယ်။
လူကြိုက်နည်းတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပေမယ့် မျှော်မှန်းထားတာထက် Popular ဖြစ်တာကတော့ အမှန်ပါပဲ။ James Franco, Taryn Manning, Francesca Eastwood တို့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေက ကြည့်သူကို ဆွဲဆောင်စေပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းက ပြောပြရင် ပေါ့သွားမှာ စိုးလို့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ မပါတဲ့ နောက်ခံအကြောင်းအရင်းကိုပဲ ပြောပြပါမယ်။
အမြဲတကျက်ကျက်ဖြစ်နေတဲ့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်က သူတို့ရဲ့မောင်ဖြစ်သူကို ကယ်ဖို့အတွက် ဘဏ်ကို ဓားပြဝင်တိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ဝင်ဖောက်တဲ့ ဘဏ်က သာမန်ဘဏ်တစ်ခု မဟုတ်တဲ့အခါမှာတော့......
[GENRE]:……………………….… .:) Horror,Thriller
[FILE SIZE]:…………………….….:) 670 MB
[Translated By]:……………………..:) R!B
Posted by Y Junction at 8:26:00 AM No comments:
Labels: Hollywood, Horror, Thriller
ဒီဇာတ်ကားမျိုးတွေက သည်းထိပ်ရင်ဖိုကောင်းလို့ R အဆင့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ကားတွေပါ။ (ညဖက် သေးထမပေါက်ရဲတဲ့သူများ မကြည့်သင့်ပါကြောင်း) Fright Meter Award မှာ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်ဆုကို ရထားကတည်းက စိတ်ခြောက်ခြားဖွယ် သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ရှိတဲ့ Esther (Isabelle Fhurman) ကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဇာတ်ကားထုတ်လုပ်သူကလည်း မင်းသားကြီး Leonardo DiCaprio ဖြစ်တော့ ထူးခြားတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
ဇာတ်လမ်းက သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက် ရှိပေမယ့် သမီးကြီးတစ်ယောက်ထပ်လိုချင်လို့ မိဘမဲ့ကလေးမလေး တစ်ယောက်ကို ခေါ်ယူမွေးစားရာကနေ စတာပါပဲ။ မိဘမဲ့လေး Esther ရဲ့ နောက်ကြောင်းကလည်း မရိုရှင်းမှန်းသိလိုက်ပြီး ထူးဆန်းပြီး ဥာဏ်ရည်ထက်တဲ့ ၉ နှစ်အရွယ် ကလေးမလေးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ မိဘနှစ်ဦးရဲ့ထိပ်လန့်ဖွယ်အတွေ့အကြုံတွေကတော့.......
[GENRE]:……………………….… .:) Horror, Mystery, Thriller
[FILE SIZE]:…………………….….:) 882 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h3mins
[Fixed By]:……………………..:) Wai Linn Kyaw
Posted by Y Junction at 11:54:00 PM No comments:
သည်းထိပ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားမျိုးကြည့်ချင်ရင် အာရှဖက် ရုပ်ရှင်တွေလည်း ရွေးချယ်ကြည့်ရတာ ခံစားချက်ပိုနီးစပ်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ အနောက်တိုင်း ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်း သည်းထိပ်ရင်ဖိုစရာ ဖြစ်ပေမဲ့ တချို့Signs တွေ Culture တွေကျတော့ ကိုယ်နဲ့ သိပ်မရင်းနှီးတော့ ရင်ဖိုသင့်သလောက် မဖိုသလိုပဲ။
ဒီ Stoker ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့ အာရှအရသာကိုပါထည့်ပေးနိုင်မှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒါရိုက်တာက Park Chan-wook လို့ခေါ်တဲ့ အာရှသားဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ Old boy တို့ The Handmaiden တို့ရဲ့ဖန်တီးသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သတ်တာ ဖြတ်တာတွေ ပါလို့ R-rated လုပ်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေပဲ အရိုက်များတဲ့ ဒါရိုက်တာပါ။
မမျှော်လင့်ဘဲ ဖခင်ဆုံးသွားတဲ့ မိသားစုမှာ ဖရိုဖရဲဖြစ်တဲ့အပေါ် သမီးဖြစ်သူရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေက ဘယ်လောက်ထိ သည်းထိပ်ရင်ဖိုဖြစ်သွားမလဲ ဆိုတာကတော့.....
[GENRE]:……………………….… .:) Drama, Thriller
[FILE SIZE]:…………………….….:) 779 MB
Posted by Y Junction at 3:22:00 AM No comments:
ဂျိမ်းစ်ဘွန်း မင်းသားကြီး Sean Connery ဆိုလျှင် အက်ရှင်ရော ဒရာမာ ပါ ရတဲ့ မင်းသားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ကားကောင်းတွေထဲမှာ ဒီဇာတ်ကားဟာလည်း IMDb မှာ 7.6 ရထားပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းက ရေငုတ်သင်္ဘောဇာတ်လမ်းနဲ့ အက်ရှင်ကာရိုက်တာများကို ပေါင်းဖက်ထားလို့ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်မယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို စိတ်ဝင်စားအောင် ရိုက်ပြထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရေအောက်ရိုက်ချက်တွေက မင်သက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း Best Effects, Sound Effects Editing မှာ Oscar ဆု ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းက Nuclear သယ်လာတဲ့ ရုရှားရေငုတ်သင်္ဘောက စတာပါ။ အမေရိကားအထိကို သယ်လာတဲ့ ရုရှား ကပ္ပတိန်နဲ့ အမေရိကက တားဆီးတဲ့သူတွေအကြား ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ထားတာပါ။ စစ်အေးခေတ်ကာလရဲ့ အဖြစ်ဆိုးကို ဘယ်လိုရပ်တန့်ခဲ့လဲ ဆိုတာကတော့....
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Adventure, Thriller
[FILE SIZE]:…………………….….:) 872 MB
Labels: Action, Adventure, Hollywood, Thriller
Posted by Y Junction at 10:35:00 AM2comments: